Nagu saabsan - HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD
ENGE Ku dhashay beeraha
Diirada saar caafimaadka
Enge Biotech waxay ku taal Shijiazhuang Hebei, Shiinaha. ku hawlan soo saarista agro-kiimikada ay ka mid yihiin Cayayaanka, Dhirta, Fungicides, jaangooyaha koritaanka dhirta control Xakamaynta cayayaanka caafimaadka bulshada, Dhex dhexaadinta Cayayaanka iyo Bacriminta .. Ku qalabaysan noocyo badan oo khadka wax soo saarka horumarsan ee TC, SC, WDG, DF, WP, SP, EC, EW , SL, ME, GR, iwm. Kooxaheena waxay in ka badan 20 sano khibrad u leeyihiin soo saarista sunta cayayaanka. Taageer in ka badan 50 walxaha diiwaangelinta (ICAMA) iyo awood xoog leh oo ku saabsan alaabta cusub ee R & D.
Tayada Waa Nolosha Shirkadeena. Alaabada Enge Biotech dhamaantood waxay ka yimaadaan alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoonaan karo, warshadeena waxay si adag u xakameeyaan tayada wax soo saarka, iyadoo qalabka wax soo saarka horumarsan ee adduunka, aan horumarino isla markaana soo saarno qaab masuuliyad leh, hubinta in alaabtayada iyo hanaankeena wax soo saar ay u hogaansamaan heerarka ugu adag tayada.
La kulanka heerarka FAO, iyo sidoo kale iskuday sida ugufiican ee loo buuxiyo shuruudaha tayada gaarka ah ee macaamiisha.
U fidinta macaamiisha alaab nabdoon, jawi-saaxiibtinimo badan iyo adeegsi sahlan.
U siinta macaamiisha badeecooyin iyo adeegyo muddo dheer soconaya.
Waxaa taageeray nidaamka xakamaynta tayada adag iyo tobanaan sano oo khibrad hodan ah. Enge Biotech waxay u dhoofisay in ka badan 100 nooc oo wax soo saar leh taxane taxane ah in ka badan 30 dal, suuqyada waaweyn waa Aasiya, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika iyo Ruushka. Waxaan helnay sumcad wanaagsan sababtoo ah alaabooyinka tayada leh iyo adeegyada aadka ufiican.
Beerista waa shayga ugu weyn aduunka
Qiimahayaga iyo ujeedkeenu waa inaan kobcino nolosha kuwa waxsoosaarka iyo kuwa wax cuna, hubinta horumarka soosaarayaasha imanaya, Enge Mission waa inay soo saaraan waxtarka sare, sunta cayayaanka ee haraaga ah iyo kuwa haraaga ah, Ilaalinta caafimaadka dalagyada iyo caafimaadka dadweynaha, isla koraan macaamiisha adduunka oo dhan.